Ma qaadan karaa dawooyin dhacay?
Aynu isla markiiba nidhaahno: daroogooyinka dhacay ayaa weli mudan in laga takhaluso. Maamulka Cunnada iyo Dawooyinka ee Maraykanka (FDA), tusaale ahaan, waxa ay si adag ugu talinayaan Ha lagu damcin inaad isticmaasho dawooyin dhacay. Waxaana jira dhowr sababood oo halis ah oo talo-bixintan ah.
Markaa, daawooyinka qaarkood, bakteeriyadu waxay bilaabi kartaa inay ku tarmaan waqti ka dib. Kuwo kale waxay noqdaan dhumucyo: waxaad cabtaa iyaga oo rajaynaya daawo, cudurkuna wuu sii socdaa. Weli qaar kale ayaa beddela kiimikaad ka kooban oo guud ahaan isu beddela sun.
Doodaha FDA waxay u muuqdaan kuwo macquul ah. Si kastaba ha ahaatee, arrinta dawooyinka dhacay maaha mid toos ah sida ay u muuqato. Waana sababtaas.
Waa maxay sababta dawooyinka dhacay aanay daruuri u xumayn
Marka hore, aan ogaano waxa ay tahay taariikhda dhicitaanku. Tani waa muddada Taariikhaha uu dhacayo Daawadu, Dawooyinka dhacay wali ma badbaadsan yihiin in la qaato? , inta lagu guda jiro shirkadda dawooyinka ee soo saartay daawo gaar ah dammaanad qaaday ammaankeeda iyo waxtarkeeda. Laakiin qeexida muddada muddadani waa shay aad u shaki badan.
Nolosha shelf waxaa guud ahaan lagu qeexay sida soo socota. Ka dib markii la sii daayay daroogo kale, soo-saaraha ayaa hagaajiya sifooyinkeeda, oo ay ku jiraan isku-dhafka kiimikada iyo xoojinta maaddooyinka firfircoon, ka dibna waxay ku dhejiyaan daroogada shelf. Hal sano ka dib, halabuurka daawada ayaa mar kale la falanqeynayaa waxaana la sameeyay gunaanad ku saabsan waxtarkeeda. Falanqaynta ayaa soo noqnoqonaysa laba sano ka dib. IWM.
Dhibaatadu waa tan: ka soo qaad daawadu waxay ku jirtay shelf ilaa saddex sano. Laguma sii dayn karo iib la'aanteed waqti cayiman Si kastaba ha ahaatee, way ku liidataa in shirkad dawooyin ahi ay dib u dhigto bilawga iibka. Sidaa darteed, soo-saaraha ayaa tilmaamaya muddada hore loo hubiyay sida taariikhda dhicitaanka, isla 3 sano, iyo damiirka cad waxay u soo diraan daawada farmashiyaha.
Dhab ahaantii, daawadu waxay ahaan kartaa mid waxtar leh in ka badan saddex sano. Laakin abuurayaashu mar dambe ma hubiyaan kan Khayaaliga ah ee Taariikhaha Dhacdooyinka Daawadu.
Shirkadaha dawooyinka ayaa ah kuwa kaliya ee haysta lacagta ay ku sameeyaan cilmi baaris waqti dheer ah oo ku saabsan waxtarka daroogada. Si kastaba ha ahaatee, gabi ahaanba ma haystaan ​​dhiirigelin dhaqaale oo ay ku sameeyaan tan. ...
Lee Cantrell Agaasimaha Waaxda San Diego ee Xarunta Xakamaynta Sunta ee California
Si kastaba ha ahaatee, waaxaha haysta dhiirigelinta dhaqaale si ay u daraaseeyaan nolosha shelf ee dhabta ah ee daroogooyinka ayaa weli jira. Tani waa, tusaale ahaan, Waaxda Difaaca Mareykanka. Sanadkii 1986, waxay bilowday Barnaamijka Kordhinta Nolosha Shelf-Life (SLEP Expiration Dating Extension) iyada oo la socota FDA si loo badbaadiyo kharashka cusboonaysiinta daawooyinka lagu kaydiyo dukaamada degdega ah.
Barnaamijku si joogto ah ayuu miro-dhal u noqdaa. Tusaale ahaan, 2006, SLEP waxay tijaabisay 122 daawooyin oo kala duwan oo lagu kaydiyay xaalado wanaagsan. Intooda badan ugu dambeyntii waxay kordhiyeen Xogta Xasiloonida ee Alaabta Dawooyinka ee Lagu Kordhiyey Wax Ka Badan Taariikhaha Dhaca La Sheegay ilaa afar sano.
Waa kuwee daawooyinka dhacay oo aan la qaadan karin
Waxaan mar labaad xoogga saaraynaa: inkastoo xogta kor ku xusan, weli waa mudan tahay in la dhegeysto talooyinka FDA oo si taxadar leh loo cusbooneysiiyo qalabka gargaarka degdegga ah haddii loo baahdo. Tani maahan kan ugu dhaqaalaha badan, laakiin xaqiiqdii doorashada ugu caafimaadka badan.
Taariikhda dhicitaanku waa taariikhda ay mas'uuliyadda waxtarka iyo badbaadada daawadu ka gudubto soo saaraha una gudbiso macaamilka. ...
Barbara Stark Baxter MD, Kulliyadda Qalliinka iyo Daaweynta Jaamacadda Columbia, New York
Laakiin ka waran haddii, tusaale ahaan, madax-xanuun kugu hayo, oo aad leedahay kaliya paracetamol uu dhacay dhowr bilood? Ama ka sii daran: adiga ama qof u dhow waxaad leedahay dareen-celin xasaasiyad daran (isku mid barar Quincke ah), oo waxaa jira xitaa irbado-auto-injector leh adrenaline, laakiin taariikhda dhicitaanka ... Duri ama ha iska duri? Aynu ogaano.
Kuwaas oo dawooyin dhacay aan ammaan ahayn
Daraasado caafimaad lama samayn si loo xaqiijiyo khatarta dawooyinka dhacay. Si kastaba ha ahaatee, khubarada ku jirta xogta macluumaadka Drugs.com waxay isticmaalaan caqli-galnimo si ay si adag ugu taliyaan Taariikhaha dhicitaanka Daawadu, Dawooyinka dhacay wali ma badbaado in la qaato? HA ISTICMAALIN daawooyinka soo socda taariikhda dhicitaanka ka dib.
Insulin . Waxa loo isticmaalaa in lagu xakameeyo heerka sonkorta dhiigga ee sonkorowga. Daroogadu waxay bedeli kartaa halabuurka kiimikada iyo ugu yaraan ma caawineyso.
Nitroglycerin afka laga qaato . Daawo caan ah oo loogu talagalay angina pectoris. Furitaanka ka dib, nitroglycerin waxay luminaysaa waxtarkeeda si dhakhso ah.
Diyaarinta nafleyda . Qeybtaan, gaar ahaan, waxaa ku jira tallaalada, wax soo saarka dhiigga, immunoglobulins, sunta. Maaddooyinkooda firfircoon sidoo kale si degdeg ah ayaa loo dhimay.
Antibiyootigyo ka tirsan kooxda tetracyclines . Sida laga soo xigtay wararka qaar, ka dib taariikhda dhicitaanka, waxay soo saari karaan metabolite sun ah. Ma Tariikhda Uu Dhacayo Daawadu Muran Ka Taagan Tahay, Waxba Ma U Jeedaan? su'aasha, si kastaba ha ahaatee, waxa fiican in aan la raadiyo runta, halis u ah caafimaadkooda.
Antibiyootiga oo ah qaab ka joojinta . Kadib taariikhda dhicitaanku, waxay aad ugu dhowdahay inay noqdaan kuwo aan waxtar lahayn.
Dhibcaha indhaha, buufinta sanka iyo dawooyinka kale ee lagu ilaaliyo . Waqti ka dib, waxyaalaha ilaaliyayaasha ayaa kala daadsan, taas oo macnaheedu yahay in bakteeriyadu ay bilaabi karto inay ku bato xalka.
Daawooyinka qaab irbado . Waa inaadan khatar gelin iyaga, xataa haddii waxa ku jira saliingaha aanay isbeddelin muuqaalkooda. Waxaana hubaal ah in ay lagama maarmaan tahay in la diido cirbadaha haddii xalku noqdo daruuro, midab-doorsooma, ama roobaadku ka dhex muuqdo.
Diyaargarow si gaar ah loo diyaariyey . Daawooyinkan lama ogola FDA, laakiin Isku-dhafka iyo FDA: Su'aalaha iyo Jawaabaha ayaa mararka qaarkood loo baahan yahay. Farmashiistaha ayaa isku dari kara maaddooyin dhowr ah si uu u abuuro badeecad ku habboon baahida bukaanka gaarka ah. Marnaba waa in aan dawooyinka la isku daray si gaar ah loo qaadan ka dib taariikhda dhicitaanka ee uu ku dhawaaqay takhtarka jooga, maadaama saameyntoodu noqoto mid aan la saadaalin karin.
Dawo kasta oo u eg mid duug ah oo wasakhaysan . Haddii kaniiniyada ay jajabaan ama urayaan, xalku wuxuu noqday daruur, oo cadarkii ama kareemkii ayaa engegay, ha cunin hana isku marin naftaada. Tani waa mamnuuc.
Waa kuwee daawooyinka dhacay ee la isticmaali karo haddii loo baahdo
Liiska dawooyinka noocaan ah ayaa laga yaabaa inuu aad u ballaaran yahay. Sidaa darteed, daraasaddii 2012-kii Xasiloonida Walxaha Firfircoon ee Dawooyinka Dhakhaatiirta ee Dhicisoobay, Saynis-yahannadu waxay falanqeeyeen siddeed daawo oo ay ku jiraan 15 maaddooyin firfircoon, nolosha shelf taas oo dhacday 28-40 sano ka hor.
Waxaan ogaanay in qaar ka mid ah daawooyinkan, xitaa 40 sano ka dib taariikhda la soo saaray, ay weli si buuxda waxtar u leeyihiin.
Waxaa laga yaabaa inay jiraan qaar kaloo badan oo dawooyin sii raagaya. Laakiin waxaan liis gareyn doonaa oo kaliya walxaha firfircoon iyo diyaargarowga kuwaas oo ay jiraan xog si cilmiyeysan loo aasaasay.
Paracetamol . Xataa iyadoo laga daahday sanado badan, walaxda firfircoon waxay sii haysaa waxtarkeeda 99%. Cilmi-baarayaashu, si kastaba ha ahaatee, ma dammaanad qaadi karaan in dhammaan kaniiniyada dhacay ay si isku mid ah waxtar u yeelan doonaan. Markaa haddii kaniiniga kowaad aanu shaqayn, ha qaadan ka labaad.
Aspirin . Ma aha sixir la mid ah paracetamol: 10 sano ka dib taariikhda dhicitaanka, aspirin wuxuu lumiyaa 99% waxtarkiisa. Laakiin haddii 1-2 sano oo kaliya ay dhaaftay, oo ma jiraan wax kale oo xanuunka gacanta ah (laakiin aad loo baahan yahay!), Waxaad isku dayi kartaa inaad ku bogsato kaniinigan. Jid ahaan, waxaa jira jabsi nolosha ah oo kuu oggolaanaya inaad aqoonsato daroogo kharriban oo aan madmadow lahayn: Asbiriin aan faa'iido lahayn ayaa u jajaban qaybaheeda waxayna bilaabataa ur aan fiicnayn.Ma qaadan kartaa Claritin dhacay? acetic acid. Waa wax aan faa'iido lahayn in la qaato daawadan oo kale.
Codeine . Walaxda si adag loo qoray oo leh ficil antitussive. Xitaa iyadoo si qoto dheer looga daahay, waxay sii haysaa waxtarkeeda in ka badan 90%.
Antihistamines, gaar ahaan loratadine ku salaysan . Caafimaadka Raggu waxay soo sheegeen 16 Daawooyin ah oo aad qaadanayso ama aad ka Tuuri karto Golaha Dawayntaada in loratadine ay si guul leh uga badbaaday shaybaadhyadii walbahaarka: waxa la kululeeyay 6 saacadood at 70 ° C waxaana lagu marinay qorraxda tooska ah 24 saacadood. Tijaabooyin adag ka dib, 99% walaxda firfircoon ayaa badbaaday. Tani waxay ka dhigan tahay in loratadine ay u badan tahay inay sii ahaato mid waxtar leh muddo dheer ka dib taariikhda dhicitaanka.
EpiPens . Kuwani waa autoinjectors epinephrine qaali ah oo loo isticmaalo in lagu daweeyo falcelinta xasaasiyadda dilaaga ah. Mid ka mid ah daraasadda Epipenphrine Concentrations ee EpiPens Taariikhda dhicitaanka ka dib ayaa lagu ogaaday in 4 sano ka dib taariikhda dhicitaanka, Epipens waxay ahaayeen 84% waxtar leh. Kani ma aha shax diiwaanka ama carte blanche kaas oo meesha ka saaraya baahida loo qabo iibsashada auto-injector cusub si loogu beddelo mid dhacay. Waa xog keliya: xaalad degdeg ah, EpiPen dhacay ayaa ka fiican waxba.
Ka dib marka la sheego EpiPen, shay muhiim ah waa in la yiraahdo: waa la ogol yahay in lagu tijaabiyo taariikhda dhicitaanka daawooyinka kaliya xaaladahaas marka noloshaadu aysan ku xirneyn daawooyinkan. Haddii aad weli qiimeyso caafimaadkaaga, cusboonaysii qalabkaaga gargaarka degdegga ah waqti ku habboon.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, Ma qaadan karaa dawooyin dhacay?!